Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » Ukuhamba ngeeVirgin ngoku ngokuhamba ngenqanawa ukuya eNassau naseBimini
Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukuhamba ngeeVirgin kwiiBahamas
Ngogonyo olonyukayo kunye nezithintelo zohambo eziphakamisa umhlaba wonke, imigca yokuhamba ngenqanawa iyabuya ijikeleze ngokupheleleyo kunxweme lweCaribbean. IVirgin Voyages 'Scarlet Lady, inqanawa entsha yobunewunewu, yaqala ixesha layo "lokuvula" ukuhamba ngenqanawa ukuya kwiCaribbean, iqala kwiBahamas ngobusuku obune- "Fire and Sunset Soirées," kubandakanya indawo yokumisa e-The Beach Club eBimini. Kule veki iphelileyo bekubanjwe imisitho yokusungulwa komkhulu kunye naseBimini, apho uSekela-Nkulumbuso kunye noMphathiswa wezoKhenketho, uTyalo-mali kunye noPhapho oHloniphekileyo u-I. Chester Cooper kunye noMlawuli-Jikelele u-Joy Jibrilu bamkele umgaqo wokuhamba ngenqanawa kunxweme lweZiqithi zeBahamas.
Ukuhamba ngenqanawa ngeveki kuya kuba nefuthe elihle kuqoqosho lwasekhaya.
ILady Scarlet izakwenza utyelelo ngeveki ukuya eBimini naseNassau kwezi nyanga zisixhenxe zizayo, ukuqala ngo-Okthobha u-2021 ukuya ngoMeyi 2022.
Umzila wokuhamba ngenqanawa ufuna ugonyo olupheleleyo lweendwendwe kunye nabasebenzi. Abakhweli baya kuvavanyelwa i-Covid-19 ngaphambi kokubhoda, iindleko ezigutyungelwe ngumgaqo wokuhamba ngenqanawa.
Ngexesha lokusungulwa kwe-Bimini, uSekela-Nkulumbuso u-Cooper uvakalise ithemba lakhe lokukhula kwezoqoqosho ngokujonga obu budlelwane butsha. "Ukuhamba ngenqanawa ngeveki kuya kuba nefuthe elihle kuqoqosho lwasekhaya, kwaye iindwendwe ezihamba ngenqanawa ziya kufumana lonke uvuyo losuku kwisiqithi esincinci esine-tropical, ukusuka kubunewunewu obumnandi be-sand-white, ulwandle olumhlophe olumhlophe, ukuya kutyelelo olubathatha Ukuloba iinyamakazi ezinkulu, ukuntywila emanzini anzulu, ukuhamba ngephenyane, kunye nokudibana namahlengesi, utshilo uSekela Nkulumbuso uCooper.
UMlawuli-Jikelele u-Joy Jibrilu uvakalise uluvo lukaSekela-Nkulumbuso u-Cooper kumsitho wokumiselwa owawubanjelwe e-Nassau, “Uhambo lweeNtombi zaseVirgin oluhamba nomhla e-Nassau kunye nosuku e-Bimini luza kuvumela iindwendwe zakho ezingaphezu kwe-2,700 XNUMX ukuba zinandiphe Bahamas njengaye jonga ezinye zeBahamas'Iindawo zembali ezinomtsalane kunye nokunxibelelana nabantu bethu abanobubele, nabamkela iindwendwe. ”
Inqanawa yabantu abadala kuphela ehamba ngeenqanawa ezingama-2,770 (kubandakanywa abasebenzi) kunye neendawo zokutya neziselo ezingama-24. Inqanawa ikwanendawo ezininzi zeminyhadala, yekhasino engenamsi, i-arcade, iziko lokomelela komzimba elinendawo ezimbini kunye nokunye.
ILady Scarlet izakwenza utyelelo ngeveki ukuya eBimini naseNassau kwezi nyanga zisixhenxe zizayo, ukuqala kweyeDwarha 2021 ukuya ngoMeyi 2022. Ekuqwalaseleni iinkqubo zeCovid-19 kunye nokuqinisekisa ukhuseleko, umgca wokuhamba ngenqanawa ufuna ugonyo olupheleleyo kuzo zombini iindwendwe kunye nabasebenzi. Abakhweli baya kuvavanyelwa i-Covid-19 ngaphambi kokubhoda, iindleko ezigutyungelwe ngumgaqo wokuhamba ngenqanawa. Imigaqo-nkqubo yezempilo ebhodini ibandakanya ukucoceka, ukuphambana ngokwasemzimbeni, ukuhlala ngokulinganiselweyo kunye nokunyanzeliswa kwezikhokelo zikarhulumente wasekhaya kwindawo nganye.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nohambo lweeVirgin Travel, ndwendwela ifinyama.com.